Sina Spunmelt fitambarana famokarana tsy vita tenona, mpanamboatra sy mpamatsy tsipika tsy milamina namboarina | Meiben
Tombony amin'ny fitaovana tsy tenona
1. Ny fikorianan'ny fitaovana tsy vita tenona iray manontolo dia azo alain-tahaka tanteraka, ary olona 1 ~ 2 ihany no ilaina hiasa, izay afaka mamonjy asa voafetra.
2. Ireo fitaovana vita amin'ny lamba tsy tenona dia afaka manitsy ny hafainganan'ny famokarana sy ny haben'ny vokatra ao anatin'ny faritra. Ny fitaovana lamba tsy misy tenona dia mampiasa fiasan'ny efijery mikasika, misy ny halavany maharitra, ny fanarahana ny photoelectric, ny fanisana mandeha ho azy ary ny famelezana ho azy, sns
3. Mba hahatsapana bebe kokoa ny vokatra azo avy amin'ny hetra amin'ny fitaovana tsy tenona, ny fitaovana tsy tenona dia manana ny asany amin'ny famerenana ireo fitaovana ambim-bava mandritra ny fizotry ny famokarana ireo fitaovana tsy tenona, izay manangona ho azy ireo sisa tavela mandritra ny famokarana. dingana, izay manampy amin'ny fampiasana faharoa ary mampihena ny hamafin'ny asa. Fampitomboana ny fahombiazan'ny asa. Ny famerenana ireo fitaovana fako dia tsy mamonjy loharanon-karena fotsiny fa misy akony fiarovana tsara amin'ny tontolo iainana.
Fitaovana tsy tenona
Famaritana fitaovana tsy voatenona
Fonosana fanaterana fitaovana tsy tenona
Fepetran'ny asa sy fikojakojana ny tsipika famokarana tsy vita amin'ny spunbond
(1) Betsaka ny ampahany manan-danja amin'ny tsipika famokarana tsy tenona spunbond, ireo faritra ireo dia mila apetraka amin'ny toerany aorian'ny fampiasana azy, ary mila aotra zero ny fitaovana. Ny tsipika famokarana lamba tsy vita amina spunbond dia tsy tokony apetaka amin'ny fitaovana mora mirehitra sy mipoaka, ary tsy tokony apetraka eo amin'ny tsipika famokarana lamba tsy tenona spunbond. Tokony hadio hatrany ny latabatra, ary tokony hosasana madio ny tasy solika sy harafesina.
(2) Ny faritra mekanika anatiny amin'ny tsipika famokarana tsy tenona spunbond dia tsy tsara toy ny bearings, gears, sns., Izay mila zahana tsara mandritra ny fizotran'ny asa sy ny fikojakojana, ary hahazoana antoka fa ireo faritra ireo dia afaka miasa ara-dalàna. Ho an'ny faritra somary mora hitafy ary tsy nahomby dia tsy maintsy soloina ara-mekanika ara-potoana izy ireo. Ny motera, boaty fanamoriana, kodiarana fampifanarahana, sns. Amin'ilay tsipika famokarana lamba tsy tenona spunbond dia tokony hotehirizina tsara, ary ny boriboritany sy ny mekanika ao anatiny dia tokony diovina sy ahitsy.
(3) Ny tsipika famokarana tsy tenona spunbond indraindray dia manana lesoka betsaka. Ny lesoka sasany, toy ny tabataba tsy ara-dalàna, ny fitohanan'ny lalana, sns., Dia azo esorina amin'ny alàlan'ny fandidiana tanana. Ho an'ny faritra sasany amin'ny fampitana anatiny matetika dia misy menaka manosotra sasany azo ampiana mba hiantohana ny fandehanan'ny milina sy ny fitaovana milamina.
Teo aloha: PP Meltblown Production Nonwoven lamba fanaovana milina famokarana
Manaraka: Masinina tsara indrindra SMS fandidiana SMS milina tsy tenona vita amin'ny lamba milina avo lenta PP Spunbond Nonwoven Fabric Production Lin